Zavamaniry | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Famaritana ny karazana sedera sy ny karazany (miaraka amin'ny sary)
Tsy misy hazo mitovy ny hazo sedera ao anatin'ireny bibilava rehetra ireny raha ny firindran'ny fambolena ny landscapes. Izany no heverin'ny ankamaroan'ny vahoaka Anglisy, izay manazava tanteraka ny lazan'ny karazam-borona maniry any an-tanimboly aristokratika. Sedera roa na telo eo am-baravaran'ilay trano dia ampy handrafetana rafitra ara-javakanto, hanomezana azy io trano fialan-tsasatra.
Famaritana sy sary amin'ny karazana cypres
Ny tsingerim-bary maivamaivana dia mijery tsara amin'ny sehatra rehetra. Amin'ny fahavaratra dia mametraka fifanoheran-javatra eo amin'ny fiangonan'ny voninkazo izy ireo, ary amin'ny ririnina dia manaisotra ny zaridaina maintso maitso. Ny karazam-borona rehetra ao amin'ireny toeram-piompiana ireny dia hanome fahafaham-po ny zaridaina rehetra. Ilay mitady hazo amin'ny endriky labozia, ary izay te hahita hazo maitso iray na hazo fotsifotsy vita amin'ny rantsany dia hahita vovobony ho an'ny tenany.
Ny mahazatra ho an'ny latabay malalantsika amin'ny ilany maitso maitso dia mitovy amin'ny cypris, izay ny toerana nahaterahany dia antsoina hoe Amerika Avaratra, ny nosy Taiwan sy Japana. Amin'ny ankapobeny dia fantatra ireo karazam-biby enina lehibe amin'ity hazo ity, ao anatin'izany dia misy karazany maro isan-karazany. Ny hazo rehetra amin'io karazan-javamaniry io dia misy karazana satroboninahitra piramida sy sola-mena.
Fir: ireo karazana sy karazana malaza indrindra
Ny pensilihazo dia tandindona marevaka misy satroboninahitra mifangaro. Ny satrobonan'ny kitapo dia manomboka amin'ny loha. Ao amin'ny hazo lehibe, ny tampon'ny satroboninahitra na boribory na boribory. Ny lokon'ny periderm dia maitso, tsy voatery henjana amin'ny ankamaroan'ny karazan-kazo. Ny roapolo amin'ny hazo matanjaka dia mihamatanjaka sy mitroka elaela.
Fitaovana serafima: ahoana no hitombo eo amin'ny teti-bola
Ny iray amin'ireo safidy tsara indrindra amin'ny fananganana trano fialan-tsasatra dia serfa serba. Manintona ny mpividy izy, tsy noho ny toetrany ivelany ihany, fa koa amin'ny faharetany, ary koa ny fikarakarana fikarakarana. Saingy ireo hatsaran-toetra ireo dia ampy hampitombo ny kandidà rehetra hafa? Famaritana fohifohy momba ny karazan-javamaniry Serba, izay manana ny siansa ny picea omorika, maneho ny fianakaviana Pine.
Karazan-kazo: kanto mahafinaritra amin'ny tananao manokana
Ny kalandrie dia mamerina mitodika amim-pahatokiana ireo sora-baventy voamarika hoe "Desambra", midika izany fa manakaiky ny taona vaovao. Fientanentanana mahafinaritra, fialantsasatra, planina ary nofinofy - miara-miara-miory amin'ity maria ity isika. Saingy ny zavatra manan-danja indrindra dia mazava ho azy ny hazo krismasy, izay tsy azo ekena ity fialan-tsasatra ity. Mianatra ny fomba handravahana ity hazo ity isika mba hahatsiarovana ny fivoriana ny taona ho avy.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Zavamaniry